Ogeysiis Iyo Raali Gelin Ku Socota Dhamaan Inta Xiiseysa Wararka Sport Ee Ka Bixi Jiray Shabakada Deeyoo
Dhamaan inta jecel ciyaaraha ku baxa luqadooda Soomaaliga waxaan idin ogeysiineynaa oo idinku bishaareyneynaa in shaqo iyo dadaal dheer kadib aan ku guuleysanay inaan idiin sameyno shabakad sport ama ciyaaro oo ka madax banaan qeybtii hore.
Shabakadan cusub oo si dadban u hoos imaaneysa deeyoo Company waxa magaceedu tahay www.deeyoosport.com. waxaan kusoo bandhigi doonaa noocyada kala gedisan ee ciyaaraha sida kubada cagta, orodada, teniska, baabuurta iyo baaskiilada, basket, lalis, dabaasha iyo xitaa ciyaaraha barafka marka la gaaro xilliyadooda.
Waxaa ka shaqa geli doona wariyayaal xirfad u leh qoraalka iyo soo tebinta ciyaarahan faraha badan saaqxiibayaal, aad ayaana idinkaaga raali gelineynaa dib u dhicii weynaa ee aad kala kulanteen deeyoo qeybteedii sport oo u badneyd kubada cagta kaliya.
Hadaba maalin walba iyo saacad walba waxaan sameyn doonaa update ama qoraal aan waqti lahayn ee hawada nagala socda hadii alle yiraahdo.
balanteenu waa deeyoosport.com oo aan uga bogano ciyaarihii ugu danbeeyay dunida.
maamulka Deeyoo Company oo idin leh ramadaan kariim mar kale.